SARUDZA MUTAURO Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Batak (Toba) Biak Bicol Bislama Boulou Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiKaren (S'gaw) ChiSutu (Lesotho) ChiSutu (South Africa) ChiTetun Dili Chichewa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuukese Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Digor Drehu Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Iban Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabiye Kannada Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marshallese Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mizo Mongolian Moore Mutauro Wemasaini wechiQuebec Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuFinland Mutauro Wemasaini wokuGermany Mutauro Wemasaini wokuHungary Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuKorea Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuPoland Mutauro Wemasaini wokuVenezuela Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngangela Nias Niuean Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Runyankore Russian Rutoro Samoan Sango Saramaccan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urhobo Uruund Uzbek Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
VAMWE VANOTI AIWA. Mumwe chiremba akati kushandisa Bhaibheri kwakafanana nekudzidzisa chemistry uchishandisa bhuku rakanyorwa kuma1920. Munhu asingabvumi kuti Bhaibheri rinoshanda anogona kukubvunza kuti ungashandisa here bhuku remakombiyuta rakanyorwa kare kuti uzive mashandiro emakombiyuta emazuva ano. Izvi zvinoratidza kuti vamwe vanofunga kuti Bhaibheri harichashandi.
Iye zvino zvakwava nemaTV neindaneti, zvine musoro here kutsvaga mazano kubva muBhaibheri? Mawebsite akawanda ari kupa vanhu mazano panyaya dzakasiyana-siyana. Vanhu vakadzidza, vane mukurumbira uye vanyori vemabhuku vari kubuda paTV vachipawo mazano. Kunewo mabhuku akawanda anotengeswa mumashopu, uye vakawanda vari kuatenga.
Nezvese izvi zvavako mazuva ano, munhu angatsvagirei mazano muBhaibheri rakanyorwa makore anenge 2 000 apfuura? Ichokwadi here kuti kutsvaga mazano mubhuku rekare iroro kwakafanana nekushandisa bhuku rekare rechemistry kana remakombiyuta? Aiwa, hachisi chokwadi. Zvinhu zvesainzi zvinogara zvichichinja, asi zvinodiwa nevanhu pakurarama hazvichinji. Vanhu vachiri kuda kuziva chinangwa cheupenyu, zvavangaita kuti vawane mufaro, vanzwe vakachengeteka, vagarisane mumhuri, uye vave neshamwari dzechokwadi.
Kunyange zvazvo Bhaibheri rakanyorwa kare, rinobatsira pazvinhu izvi uye pane zvimwewo zvakawanda. Rakafemerwa neMusiki wedu uye rinotibatsira pane zvese zvatinoita muupenyu uye pamatambudziko atingasangana nawo. (2 Timoti 3:16, 17) Zvarinotaura hazvimbotadzi kushanda! Iro pacharo rinoti: “Shoko raMwari ibenyu.”—VaHebheru 4:12.
Zvinotaurwa neBhaibheri ndezvechokwadi here? Richiri kushanda here kana kuti harichashandi? Magazini ino ichakubatsira kupindura mibvunzo iyi.
Bhaibheri Rinongovawo Bhuku Rakanaka Here?
Nei vanhu vakaisa upenyu hwavo pangozi kuti vaverenge kana kuti vangova neBhaibheri?
Ona zvimwe zvinhu zvinobatsira zvine chekuita neBhaibheri, bhuku rinofarirwa kupfuura mamwe ose.
Text Nzira dzokudhaunirodha nadzo mabhuku NHARIREYOMURINDI Bhaibheri Richiri Kushanda Here?
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa NHARIREYOMURINDI Bhaibheri Richiri Kushanda Here?
NHARIREYOMURINDI Bhaibheri Richiri Kushanda Here?